Rohingya Students Forum: July 2017
photo caption: xxx
Murár uottún dóri aga
Baái soler faní baicá
Fáida gorí farar fara
O... Kimoti aññárár hál.
E hálór mas aññárár sálon,
E hálór faní aññrár zibon.
Hálor dhólor nogolor mazé,
Ókkol gula lagai ére.
E hállán aññrár bol saára noóne.
Féza, baickhaçí warainnar mazór
Sotor noófan, tulí félo
Haindá thúra no báñge fán
Rotó bol di sóllukor thaan.
Hálor agar-gujjar forók nogorí
Bañdó, tuló, kérmos gorí.
E hál or ham, gaáli sára forandi
Fura goijjúm, rait-din ekku fuáñti.
Lékóya 💥 Kuwáiccójjá
[Me maic ór háñt taarík, 2017]
Posted by Rohang king at 8:05 AM
ဝဏ္ဏကျော်ထင် ဦးစိန်မြမောင်နှင့် ဗမာနိုင်ငံတော်သီချင်း
မြန်မာ့တေးဂီတသမိုင်းတွင် စွမ်းအင်အထက်မြက်ဆုံးသော တေးတစ်ပုဒ် (သို့မဟုတ်) လူတိုင်းသီဆိုရန် တေးသွားနှင့် သံစဉ်ပါ ခက်ခဲလှသော တေးတစ်ပုဒ်သည် ယနေ့ "နိုင်ငံတော်သီချင်း" ဟု သတ်မှတ်ထား သည့် သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။
သီချင်းရေးစပ်တဲ့သူက စိန်မြမောင် ဖြစ်ပြီး ဦးနုရဲ့တာဝန်ပေးချက်အရ ဦးနုရဲ့အိမ်မှာပဲ ရေးစပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပထမဆုံး သီဆိုသူကတော့ ရွှေညာမောင် ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရသည့် ၁၉၄၈ ဇန်န၀ါရီ ၄ ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံတော်အလံကို လွှင့်တင်ရမှာ ဖြစ်သည့်အတွက် ထိုနေ့တွင် နိုင်ငံတော်အလံတင် အခမ်းအနားမှာ သီဆိုဖို့ သီချင်းတစ်ပုဒ် လိုအပ်လာပါတယ် ။ သည့်အတွက် ထိုစဉ်က နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနုက လွတ်လပ်ရေး အလံတင် အခမ်းအနားမှာ သီဆိုဖို့ သီချင်း တစ်ပုဒ်ရေးရန် ဆရာရွှေတိုင်ညွန့်အား ခေါ်လာပေးရန် ဦးစိန်မြမောင်ကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဦးစိန်မြမောင်က ဆရာရွှေတိုင်ညွန့် ကွယ်လွန်သွားပြီ ဖြစ်သည့်အတွက် မရှိတော့ကြောင်း အကြောင်း ပြန်ကြားခဲ့ရာ ဦးနုက တခြားတေးရေးဆရာများနှင့် တိုင်ပင် ရေးသားပေးရန် ဦးစိန်မြမောင်အား ထပ်မံ တာဝန်ပေးအပ်လိုက်ပြန်ပါတယ်။
ဦးစိန်မြမောင်က ဆရာစိန်ဝေလျှံ၊ ဒဂုန်ဆရာတင်၊ စောင်းဦးဘသန်း၊ ဂီတာဦးစိန်အောင်နှင့် ဆရာရန်နိုင်စိန် တို့ကို လိုက်လံ ခေါ်ဆောင် ခဲ့ရပါတော့တယ်။ သူတို့အားလုံး စုဝေးရောက်ရှိလာပြီး သီချင်းရေးစပ်ဖို့ တိုင်ပင်ရာ၊ ဆရာဦးစိန်ဝေလျှံနှင့် စောင်းဦးဘသန်းတို့ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် စကားများ ရန်ဖြစ်ကြရာမှ သီချင်းရေးဖို့ အစီအစဉ် ပျက်ပြား ခဲ့ရပါတော့တယ်။ နောက်ထပ် သီချင်းရေးစပ်ဖို့ မည်သူ့ကိုမျှ စည်းရုံး၍မရဘဲ ဖြစ်ခဲ့ရပြီး အကြောင်းစုံကို ဦးစိန်မြမောင်က ဦးနုထံတင်ပြရာ ဦးနုက ဦးစိန်မြမောင် တစ်ယောက်တည်း ရေးနိုင်က ရေးပေးစေလိုကြောင်း ပြောကြား တာဝန် ပေးအပ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်တာဝန် ဖြစ်သည့်အတွက် ဦးစိန်မြမောင်က ရဲဝံ့စွာ တာဝန်ယူ၍ "တရားမျှတ၊ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ မသွေ" အစချီ "ကမ္ဘာမကြေ" သီချင်းကို ဦးနုအိမ်တွင် တစ်ယောက်တည်း ရေးသား စပ်ဆိုခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုသို့ ရေးသားစပ်ဆိုရာ၌ ၀ိုင်အမ်ဘီဆရာတင်၏ "ဒို့ဗမာ" သီချင်း သံစဉ်စာသားများကို အခြေခံ၍ "တရားမျှတ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေ" အစချီ၊ ပထမ ခြေဆင်းပိုဒ်နှင့် "ကမ္ဘာမကြေ" ဒုတိယသံပြိုင်တို့ကို ရက်ပိုင်းအတွင်း ပြီးစီးအောင် ရေးသားခဲ့နိုင်ပါတယ်။ သီချင်းအစအဆုံး တစ်ပုဒ်လုံးကို ဆရာဇော်ဂျီ ဦးဆောင်သော အကဲဖြတ်အဖွဲ့က သီချင်းစာသားများ၊ တစ်လုံးချင်း အသေးစိတ် စိစစ်ပြီး သီချင်းကို အတည်ပြုခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကဲဖြတ်အဖွဲ့က အတည်ပြုပြီးနောက် ၀န်ကြီးအဖွဲ့နှင့် လွှတ်တော်အဖွဲ့ နှစ်ရပ်စလုံးကပါ ထပ်ဆင့် အတည်ပြုခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသို့ အဆင့်ဆင့် အတည်ပြုပြီးသော "ကမ္ဘာမကြေ" သီချင်းကို မြန်မာ့အသံမှ ဒါရိုက်တာ ဦးခင်ဇော်က မြန်မာနိုင်ငံသို့ ခေတ္တရောက်ရှိနေသော အမေရိကန် တီးဝိုင်းတစ်ခု၏ အကူအညီဖြင့် အသံသွင်းခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး သီချင်းသီဆိုသူက အဆိုတော် ရွှေညာမောင် ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
"တရားမျှတ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေ… တို့ပြေ၊ တို့မြေ…. များလူခပ်သိမ်း ငြိမ်းချမ်းစေဖို့…. ခွင့်တူညီမျှ…. ၀ါဒဖြူစင်တဲ့ပြည်… တို့ပြည်…. တို့မြေ… ပြည်ထောင်စုအမွေ အမြဲတည်တံ့စေ… အဓိဋ္ဌာန်ပြုပေ…. ထိန်းသိမ်းစို့လေ...." "ကမ္ဘာမကြေ… မြန်မာပြည်… တို့ဘိုးဘွားအမွေစစ်မို့… ချစ်မြတ်နိုးပေ… ပြည်ထောင်စုကို အသက်ပေးလို့ တို့ကာကွယ်မလေ… ဒါတို့ပြည်… ဒါတို့မြေ… တို့ပိုင်တဲ့မြေ….. တို့ပြည်…. တို့မြေ…. အကျိုးကို…… ညီညာစွာတို့တတွေ… ထမ်းဆောင်ပါစို့လေ… တို့တာဝန်ပေ…. အဖိုးတန်မြေ" ဟူသော ဤ "ကမ္ဘာမကြေ" သီချင်းသည်
မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ အလံတင်အခမ်းအနားတွင် ယူနီယံဂျက်အလံဖြုတ်ချ၍ မြန်မာနိုင်ငံတော်အလံ လွင့်ထူရမည့်အချိန်၌ သီဆိုရမည့် နိုင်ငံတော်သီချင်း ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူး ချီးမြှင့်ပေးအပ်ရာတွင် ဦးစိန်မြမောင်သည် ဤကမ္ဘာမကြေသီချင်းဖြင့် ၀ဏ္ဏကျော်ထင်ဘွဲ့ကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဦးစိန်မြမောင်က သူမကွယ်လွန်မီ ဤ ကမ္ဘာမကြေသီချင်းကို သူရေးစပ်ခဲ့ကြောင်း ခိုင်မာသော အထောက်အထားတို့ဖြင့် တင်ပြနိုင်ခဲ့သဖြင့် ယနေ့နိုင်ငံတော်က သူ့အား ၀ိဇ္ဇာထူးချွန်ဆု (ဒုတိယအဆင့်) ချီးမြှင့်ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းကို ခံခဲ့ရသော လေးစားထိုက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Posted by Rohang king at 2:33 AM
Labels: History, သုတ
Gonti 🔢 Angka 🔢 Numbers
Sífor, andha Sifar/ kosong (coss-song) Zero 0
Ek Satu One 1
Dui Dua Two 2
Tin Tiga Three 3
Sair Empat Four 4
Fañs Lima Five 5
So Enam Six 6
Háñt Tujuh Seven 7
Añctho Lapan Eight 8
Nou Sembilan Nine 9
Doc Sepuluh Ten 10
Egaro Sebelas Eleven 11
Baró Duabelas Twelve 12
Teró Tigabelas Thirteen 13
Soiddó Empatbelas Fourteen 14
Fundóro Limabelas Fifteen 15
Cúllo Enambelas Sixteen 16
Hóñtoró Tujuhbelas Seventeen 17
Añráró Lapanbelas Eighteen 18
Unníc Sembilanbelas Nineteen 19
Kuri Duapuluh Twenty 20
Ek kuri ek Duapuluh satu Twenty-one 21
Ek kuri dui Duapulu dua Twenty-two 22
Ek kuri tin Duapuluh tiga Twenty-three 23
Tiríc Tiga puluh Thirty 30
Sallic Empat puluh Forty 40
Fonjaic Lima puluh Fifty 50
Haith Enam puluh Sixty 60
Hóittoir Tujuh puluh Seventy 70
Ací Lapan puluh Eighty 80
Nobboi Sembilan puluh Ninety 90
Cót Seratus Hundred 100
Dui cót Dua ratus Two hundred 200
Tin cót Tiga ratus Three hundred 300
Házar Seribu Thousand 1000
Ek házar ekcót Seribu seratus One thousand and one hundred 1100
Ekházar ekcó fonjaic dui seribu seratus lima puluh dua One thousand and one hundred and fifty two 1152
Ek házar duicót Seribu duaratus One thousand and two hundred 1200
Der házar Seribu limaratus One thousand and five hundred 1500
Dui házar Dua ribu Two thousand 2000
Duiházar ekcót Dua ribu seratus two thousand and one hundred 2100
Doc házar Sepuluh ribu Ten thousand 10,000
Kuri házar Duapuluh ribu Twenty thousand 20,000
Ek lák Seratus ribu One lak 100,000
Der lák Seratus limapuluh ribu One lak and fifty thousand 150,000
Açái lák Duaratus limapuluh ribu, suku juta Two lak and fifty thousand 250,000
Fañslák Limaratus ribu, setengah juta Halfamillion 500,000
Doc lák Satu juta A million 1,000,000
Egaro lák fonjaic házar satu juta seratus limapuluh ribu 1.15 millions 1,150,000
Baró lák fonjaic házar Satu suku juta 1.25 millions 1,250,000
Fudóro lák satu setengah juta 1.5 millions 1,500,000
Hótoró lák fonjaic házar satu juta tujuh ratus limapuluh ribu 1.75 millions 1,750,000
Ek kuthí Table Cell Ten millions 10,000,000
Doc kuthí Table Cell One Billion 100,000,000
Ek kuçul satu milion Ten Billions 1,000,000,000
Eházar kuçul satu trilium One Trillion 1,000,000,000,000
Table Cell (keretapi, bas) nombor _____ number _____ (train, bus, etc.) Table Cell
Adá, Eddók Setengah Half 1/2
Fai Suku Quarter 1/4
Sair borator tin Tiga suku Three quarter 3/4
Beec, bicí Lebih More Table Cell
Hom, añiththa Kurang Less Table Cell
Sounfún Sai Mutália Goró
Posted by Rohang king at 1:16 AM
Labels: language, literature, Rohingyalish
English to Rohingya to Malay Translated Part -1
agán, doriya laut sea
aina cermin mirror
Ammali almari cupboard
andha, dima telur egg
áñtii gajah elephant
apron aprén apron
asman, ubun,upan langit sky
baás bas bus
Bab ayah, bapa father
Báca Bahasa Language
badcú, buúksa kota box
baiyon terung eggplant
Bái abang, adik brother
balthí baldi bucket
balu pasir sand
batti, Fánuc lampu lamp
bazar pasar market
bazu baju shirt
bek beg bag
Bel, Beil mata-hari Sun
beéng bank bank
beça manúic lelaki man
bíaktubi topi hat
bilai kucing cat
kakak, adik sister
bolot (sáit)-guru lembu ox
boól bola ball
botol botol bottle
bou, beçi, mug isteri wife
burus berus brush
Cara tikar mat
cirí surat letter
cíçi, líya tangga stair
Ciíl Batu Stone
kacak mata sunglasses
dáagóui melarikan diri escape
daktor doktor doctor
Dadi/dahu, Nani nenek grandmother
dam harga price
decci, paikla periuk rice cooker
dhebal dinding wall
Dhéfa tasik, danau Lake
Dhúil Habuk, debu dusk
duan kedai shop
duar pintu door
Fata daun leaf
Feñsa burung hantu owl
Fíriñg capung dragonfly
fiñas bawang onion
fól timun cucumber
foran jiwa soul
Forínya Fua, foróya pelajar student
foróya pembaca reader
Fóuir bulu feather
sikat, sisir comb
Fórforí, fañgká kipas fan
Fúndúra, turuk corong funnel
fúnoya pendengar listener
fuwa manúic budak boy
gal mulut mouth
gadi, falun katil bed
Githar gitar guiter
Goiyá penyanyi singer
golóc gelas glass
Gusól hána tandas washroom
gussó daging meat
Hábar Jaháñs kapal terbang airplane
hák sayur vegetable
Haçoni, haroya pemotong cutter
Hoddá, kangá mangkuk bowl
labu manis gourd
hoilla, dil hati heart
hólibá, kasík tukang jahit tailor
hóloit kunyit turmeric
Hoñla, Zamun oren orange
huoñra belimbing star-fruit
hossóp penyu turtle
húrouin penyapu broom
kela pisang banana
keñil pinggang waist
keñra-camic, korni garpu fork
keñsi, kessi gunting Table Cell
kitab buku book
khéla permainan game
Khélaçi pemain player
khórguñc arnab rabbit
khúni pembunuh killer
Koksúe, mee vimá, kalita noodle
kuñir anjing dog
kuñír buaya crocodile
kual tengkorak skull
lekóya penulis writer
lemu lemon lemon
les ekor tail
Loçí, thínga tongkat stick
lok cacing worm
maa ibu, emak mother
mactor, ussat cikgu, guru teacher
mas ikan fish
masí lalat flies
matá kepala head
meçi tanah soil
miala-fuwa gadis girl
modot-goróya penolong, pembantu helper
modú-fuk lebah bee
mokka gula jagung corn
moók cawan mug
moris cili chilli
motór kereta car
mumbatti lilin candle
murá gunung mountain
Nas, naso menarik, tarian dance
nok, zoloui kuku, paku nails
nunnya sotong squid
nungmal tudung hood
Óñçí, hómrik labu kuning pumpkin
rait malam night
refót getah rubber
Ruón bawang-putih garlic
sal atap roof
sam kulit skin
San, Sanda, Zun
samic, júng sudu spoon
sábgorínya pembersih cleaner
sáti payong umbrella
Sáyeba wanita lady
siní gula sugar
sóloui pemetik api lighter
beras, nasi Rice
Sómondór laut Sea
suk mata eye
sul rambut hair
sulá dapur stove
sura, cuñça rokok Cigarette
tál, hánik pingan plate
Tara Bintang Star
tatti tandas toilet
tel minyak oil
tetói asam jawa tamarind
théng, céng kaki leg
théng-garí basikal bicycle
Tikka taskula cap
tir or hóñla
tohíla tuala towel
Tormus, manphól tembikai water-melon
ukhil peguam lawyer
undur tikus rat
uñth unta camel
Vúmi, guola Tanah (soil), bumi Earth
zamai, neg, beça suami husband
Zok jug jug
zór hujan rain
ahó, aiyó, ai mari, datang come
anó, an bawa, membawa bring
áñco ketawa laugh
áñro, áñraá jalan, berjalan walk
bano, bana buat, membuat make
bas, fosóngor pilih choose
barimar, thóuwamar memukul hit
báf, báfo fikir, berfikir think
bajja, firado pukul, memukul, mengalahkan beat
bángo, Fháro, aram or októ pecah, patah, waktu rehat break
bes, beso jual, menjual Sell
boiyó, bohó, boc duduk sit
cíñyo, cíko ajar, mengajar teach
dál, dálo tuang, menuang pour
dú, dúwo basuh, membasuh wash
duñr, duñro lari, berlari run
Fálda, phátla, fáldo lompat, melompat jump
Fii, fiyo, há minum drink
finó, fin pakai, memakai wear
Foró, for baca, membaca read
fus, fusó lap, mengesat wipe
gaá, goó menyanyi sing
gono, gon kira, mengira count
gúmzo, gúmza tidur sleep
há, hó makan eat
háñsur, háñsuro berenang swim
han, hando menangis cry
haço, haçt potong, memotong cut
hótgor, sinílo mengenal, pengiktirafan recognize
húno, fún dengar, mendengar listen
Hotá hoóu cakap, bercakap speak
hoó, hoí do beritahu, menceritakan tell
khélo, khéla main, bermain play
keskesa, guzour menjerit shout
kúl, kúlo buka, membuka open
lehó, leko, lek tulis, menulis write
lor, loro bergerak, berpindah move
loo, gosó ambil, mengambil take
mukgali dahó senyum smile
monotgor, tháartul ingat, mengingati remember
mukiazi gor hafal memorize
nel,neol, baáréza keluar exit
Noó tidak no
ranó, ran masak, memasak cook
saba, sabo mengunyah chew
sábgoró membersihkan clean
salo, sala memandu drive
soó, saá lihat, melihat see
súnggoró gunakan, menggunakan use
tan, tano tarik, menarik pull
thélo, thél tolak, menolak push
tíya, tíyo berdiri stand
tulkimaro ketuk, mengetuk knock
tuwa, léilagor cari, mencari find
tuwo, khúñzo carian, mencari search
udár gor meminjam borrow
ura, uro, uraba terbang fly
zan, zano, sinó tahu, mengetahui know
zira, aramgoró berehat, merehatkan rest
zo, za pergi go
Posted by Rohang king at 5:14 AM
ရွှေနှင့်ယိုးမှား ပန်းစံကား ကဗျာနှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်